Daawo Sawirrada: Nin ka inkaarsaday Qaxootiga ku Qulqulaayo Qaarada Yurub | shumis.net
Home » ISIS » Daawo Sawirrada: Nin ka inkaarsaday Qaxootiga ku Qulqulaayo Qaarada Yurub
Daawo Sawirrada: Nin ka inkaarsaday Qaxootiga ku Qulqulaayo Qaarada Yurub
Nin 25 jir ah laguna magacaabo Ahmed Almohamed ayaa dhibaato baaxad weyn u soo jiiday dadka Qaxootiga ah ee ku qulqulaayo wadamo ku yaala Qaarada Yurub kaas oo lagu sheegay in uu ahaa dilaa qatar badan .
Ninkaan oo ka qeeyb qaatay weeraradii qorsheeysnaa ee lagu qaaday magaalada Paris ayaa waxaa iminka la soo ogaaday in ay soo dirsatay kooxda Daacish kaas oo isku soo dhex qariyay Qaxooti fara badan oo wadamo dhoor ah lagu soo dhaweeyay .
Ahmed Almohamed ayaa wadamadii uu soo maray intii u dhaxeeysay 3-dii bishii Oktoobar 2015 ilaa 10-kii bishaan Novembar waxaa lagu kala sheegay Siiriya , Turkiga , Giriiga , Masdonia, Serbia , Hungaria , Austria ka dibna wuxuu dalka Jarmalka uga sii gudbay dalka Faransiiska .
Ninkaan oo aad u tababarnaa wuxuu kaligiis toogasho ku dilay dad lagu sheegay 18-qofood halka uu ugu dambeeyntii is Qarxiyay kaas oo mar kale galaftay nolasha 4-qofood .Wadamo badan oo ku yaala Qaarada Yurub ayaa iminka shaki weyn ka qaba Qaxootiga ku soo qulqulaayo dalalkooda maadaama Daacish ay sheegtay inay ku soo dhex darsadeen rag badan oo tababaran .
Title: Daawo Sawirrada: Nin ka inkaarsaday Qaxootiga ku Qulqulaayo Qaarada Yurub
Posted by galmada Net, Published at November 18, 2015 and have 0 comments